Indlela Yokunakekela Izimbuzi Ezinezinselo
Izimbuzi zine-metabolism esheshayo futhi zihamba njalo ukuze zihlole futhi zidle. Izifo ezinamahloni kanye nezinselo ezinganakiwe zenza ukuhamba nokuphequlula ukudla kube nzima futhi kubuhlungu.
Uma izikhumba zezimbuzi zigcwele, zingadala ukubola (ngokuphela komzimba nodonga lwamahlumela) kanye ne-hood scald, eyenzeka phakathi kwezinyosi 'zezinyosi'. Ama-hoo kufanele ahlelwe njalo (izikhathi eziphindwe kane ngonyaka) ukuze agcine isimo sawo esivamile - abuke inselo yezinyane lembuzi encane njengoba kubhekisela kumumo ophelele.
Indlela Yokuphatha Ukulovula Kwezinselo
I-hoof scald ivela ikakhulu ezimweni ezimanzi lapho i-microorganism Fusobacterium necrophorum ibangela ukuvuvukala phakathi 'kwezinzwani.' Isikhumba esiphakathi 'kwezinzwani' singaba luhlaza futhi sinomsoco ngombala obomvu futhi sizwela uma sithintekile. Uma kungelashwa, imbuzi ingaba nesifo esingapheli. Squirt isisombululo se-10% sethusi sulfate noma i-zinc sulfate phakathi 'kwezinzwani'. Isixazululo se-7% se-iodine singasetshenziswa futhi.
Uma izimbuzi zidla emadlelweni, ziphatse emva kwamazolo aphelile noma uzigcine endaweni enomile amahora angu-24 ngemuva kokwelashwa. Isixazululo soma phezu kwezinselo nezinyawo futhi kuzosebenza kahle. Uma inani elikhulu lezilwane emhlambini lithinteka, sebenzisa i-footbath yekhambi le-zinc noma le-copper sulfate ukuze kuvunyelwe ukungena kwendonga.
Izimbuzi ze-Boer zithinteka kakhulu.
Indlela Yokuphatha Ukubola Kwezinyawo
Ukubola kwezinyawo yisifo esithathelwanayo sezinselo ezimbuzi nezimvu futhi kubangelwa ama-microorganisms Dichelobacter nodosus noFusobacterium necrophorum. I-dichelobacter nodosus, etholakala enhlabathini engcolile.
Izibonakaliso zokuqala zezinselo ziyizimpumputhe, ziphethe imilenze emoyeni futhi zidla ngamadolo. Izilwane zingase zishaye ukuhamba futhi izinhlanzi zingase zihlambe futhi zenze i-pus.
Ukwelapha ngezinyawo kuhilela ukusika izinselo futhi ususe wonke umuthi osulelekile ohlukaniswe nezicubu ezingaphansi. Ngemuva kokuqothula, izilwane ezithintekayo kufanele zime imizuzu emihlanu nazo zonke izinyawo kwisisombululo se-10% se-copper noma i-zinc sulfate. Lokhu kungabuyekezwa kanye ngesonto amaviki amane. Izilwane ezingaphilisi, kufanele zilandelwe.
Ukungcoliswa kungenziwa uma isilwane esithathelwanayo singenwe emhlambini futhi uma izinyawo zibola ezincane zenziwa ezinhlabathini izicathulo zezivakashi.
Indlela Yokuqothula Izinselo Zembuzi
Isikhathi escono kakhulu sokuqhafaza izinhlanzi emva kokuba sezulu, lapho ama-hoop elula futhi kulula ukusika. Uzodinga umsizi ukuthi ubambe imbuzi endaweni ehlelekile yokuhlala lapho usika izinselo zayo. Usebenzisa isicu sezingwegwe, qala kuqala ukususa ukungcola nodaka kusuka kukho inselo. Ngemuva kwalokho, thola ukuthi inhlanzi yezinselo iyinqanaba ngaphambi kokuqala ukusika noma yikuphi udonga lwamahlumela.
Qala ngokuqeda iphuzu lensiza eyodwa. Bese uqeda uhlangothi olungaphandle. Uma udonga lwamahlombe lukhulile, ludabule luvule bese uluqeda ngezinhlamvu ezincane. Ungaphuthumisi le nqubo ngokuthi uthathe ukusikeka okukhulu njengoba kungabangela inselo ukuthi iphule. Gcina kancane kancane izinhlanzi phansi uze ubone umugqa omhlophe wokukhula kwezinselo. Yeka ukucwenga lapho umbala uvela obala futhi yonke inselo isusiwe.
Okokugcina, qeda uhlangothi lwangaphakathi lwezinselo - phakathi kwama-hoove ('izinzwane') lapho izilonda zihlangana khona. Qaphela lapha njengoba isithende siseduze kunanoma iyiphi enye ingxenye yenselo. Ukubola kwe-hoof kuvame ukutholakala eduze kwendwangu yezinzwane kanye nezindonga zezinselo; akuvamile ukuba isithende.